IRAN: Xildhibaankii Labaad Ee U Dhinta Caabuqa Coronavirus - BANDHIGA
Xildhibaan Iiraani ah ayaa u dhintey Caabuqa coronavirus, sida ay warisay wakaaladda wararka ee Tasnim Sabtidii maanta.
Xildhibaanka dhintay ayaa waa Haween, waxaana magaceeda lagu sheegay Fatemeh Rahbar, waxa ayna ku dhalatay magaalada Tehraan iyadoo dhawaan loo doortay xilkaas.
Ma aysan sheegin haddii lagu soo daray tirada rasmiga ah ee dalka ee ahayd 124 dhimashada fayraska, oo la bixiyay Jimcihii shalay. Rahbar ayaa ah xildhibaanka labaad iyo mid kamid ah toddobada siyaasi ee u dhintay cudurka tan iyo markii dalka Iran laga soo sheegey kiiskiisii ​​ugu horreeyay bartamihii Bishii hore ee February.
Sida ay baahisay wakaalada wararka ee u janjeerta dhanka barlamaanka dalkaasi ee Icana, ayaa sheegaya in hadda uu caabuqaan kusii faafay xarumihii dowladda.
Iiraan waxay ka mid tahay waddamada ka baxsan Shiinaha oo ay sida ba’an u saameeyeen Caabuqaan. Ilaa Jimcihii, dalka waxaa laga soo sheegey 4,747 caabuq.
Bishii 2-dii Maarso, Tasnim ayay ahayd ka gadaal markii uu ka hadlay geerida Mohammad Mirmohammadi, oo xubin ka ahaa Golaha Dhaqaalaha ee dalkaas.
Wasiir ku-xigeenka caafimaadka Iran, Iraj Harirchi, iyo xubin kale oo ka tirsan baarlamaanka dalkaas, oo magaciisa lagu sheegay Maxamuud Sadeghi, ayaa iyaguna u dhintay cudurka fayraska.
Iran ayaa xidhay iskuulada iyo jaamacadaha, waxa ay joojisay munaasabadihii dhaqanka iyo isboortiga, waxayna yareeyeen saacadaha shaqada ee guud ahaan dalka si loo yareeyo inta qof ee uu haleeli karo cudurka, kaasoo ku faafay dhamaan 31-ka gobol ee dalka Iraan.